Alụmdi na nwunye na ịgba alụkwaghịm (1-5)
E kwesịrị iji ndụ kpọrọ ihe (6-9)
Ichebara ndị ogbenye echiche (10-18)
Iwu e nyere gbasara iwere ihe fọrọ n’ubi (19-22)
24 “Ọ bụrụ na nwoke alụọ nwaanyị, ma nwaanyị ahụ amasịghịzi ya maka na ọ chọpụtara na nwaanyị ahụ mere ihe na-eme ihere, nwoke ahụ ga-edere ya akwụkwọ ịgba alụkwaghịm,+ were ya nye ya ma chụpụ ya n’ụlọ ya.+ 2 Mgbe o si n’ụlọ nwoke ahụ pụọ, o nwere ike ịga ka nwoke ọzọ lụrụ ya.+ 3 Ọ bụrụ na nwoke nke abụọ a akpọọ ya asị* ma deere ya akwụkwọ ịgba alụkwaghịm, were ya nye ya ma chụpụ ya n’ụlọ ya, ma ọ bụ, ọ bụrụ na nwoke nke abụọ a lụrụ ya anwụọ, 4 a gaghị ekwe ka di mbụ ya, bụ́ onye chụpụrụ ya, kpọrọ ya ọzọ ka ọ bụrụ nwunye ya mgbe e merụcharala ya, n’ihi na ọ bụ arụ n’anya Jehova. Unu emela mmehie n’ala ahụ Jehova bụ́ Chineke unu na-enye unu ka ọ bụrụ nke unu. 5 “Ọ bụrụ na nwoke alụọ nwaanyị ọhụrụ, ọ gaghị eso ndị agha gaa agha. A gaghịkwa ekenye ya ọrụ ọ bụla ọzọ. A gaghị ekenye ya ọrụ ọ bụla ruo otu afọ. Ọ ga-anọ n’ụlọ na-eme nwunye ya obi ụtọ.+ 6 “E nweghị onye kwesịrị iburu nkume onye o binyere ego ji egwe nri ma ọ bụ aka nkume o ji egwe nri ka ọ bụrụ ihe ibé maka ego o binyere ya,+ n’ihi na ime otú ahụ dị ka ịnara mmadụ ihe o ji akpa afọ ya* ka ọ bụrụ ihe ibé. 7 “Ọ bụrụ na a hụ na mmadụ tọọrọ nwanne ya bụ́ onye Izrel, taa ya ahụhụ ma ree ya,+ onye ahụ tọọrọ mmadụ ga-anwụ.+ Unu ga-ewepụ ihe ọjọọ n’obodo unu.+ 8 “Ọ bụrụ na ọrịa ekpenta* arịawa mmadụ, lezienụ anya ka unu mee ihe niile ndị nchụàjà, bụ́ ndị Livaị, ga-agwa unu.+ Lezienụ anya ka unu mee kpọmkwem ihe m nyere ha n’iwu. 9 Chetanụ ihe Jehova bụ́ Chineke unu mere Miriam n’ụzọ, mgbe unu si n’Ijipt na-apụta.+ 10 “Ọ bụrụ na ị gbazinye onye agbata obi gị ụdị ihe ọ bụla,+ abanyela n’ụlọ ya ka ị nara ya ihe ibé ọ chọrọ inye gị. 11 Ị ga-eguzo n’èzí, onye ahụ ị gbazinyere ihe ewetara gị ihe ibé ọ chọrọ inye gị n’èzí. 12 Ọ bụrụ na onye ahụ bụ ogbenye, ka uwe o nyere gị ka ọ bụrụ ihe ibé ghara ịdị gị n’aka ruo echi ya.+ 13 Hụ na ị chịghachiiri ya uwe ahụ ozugbo anyanwụ dara, bụ́ nke o nyere gị ka ọ bụrụ ihe ibé. Ọ ga-eji uwe ya hie ụra,+ ọ ga-agọzikwa gị. Jehova bụ́ Chineke gị ga-ewere ya na i meela ezi omume. 14 “Erigbula onye ọrụ e goro ego ihe siiri ike, nke dakwara ogbenye, ma ọ̀ bụ nwanne gị ma ọ̀ bụ onye mbịarambịa nke bi n’ala unu, n’otu n’ime obodo unu.+ 15 I kwesịrị ịkwụ ya ụgwọ ọrụ ya n’ụbọchị ọ rụụrụ gị ọrụ,+ tupu anyanwụ adaa, n’ihi na ọ dara ogbenye, ọ bụkwa ụgwọ ọrụ ya bụ ihe o chekwubere. Ọ bụrụ na ị kwụghị ya ụgwọ ọrụ ya, ọ ga-ebesara Jehova ákwá n’ihi gị, ikpe mmehie ga-amakwa gị.+ 16 “A gaghị egbu ndị nna n’ihi ihe ụmụ ha mere, a gaghịkwa egbu ụmụ n’ihi ihe nna ha mere.+ Ọ bụ naanị mmehie mmadụ mere ga-eme ka e gbuo ya.+ 17 “Ekpela ikpe na-ezighị ezi mgbe ị na-ekpe ikpe onye mbịarambịa ma ọ bụ ikpe nwa na-enweghị nna.*+ Achịrịkwala uwe nwaanyị di ya nwụrụ ka ọ bụrụ ihe ibé maka ego i binyere ya.+ 18 Cheta na ị nọ na-agba ohu n’Ijipt, ma Jehova bụ́ Chineke gị gbapụtara gị n’ebe ahụ.+ Ọ bụ ya mere m ji na-enye gị iwu ka i mee ihe a. 19 “Ọ bụrụ na ị gaa wee ihe ubi ndị dị n’ubi gị, gị echefuo ùkwù ọka* n’ubi, agaghachila ka i buru ya. A ga-ahapụrụ ya onye mbịarambịa, nwa na-enweghị nna,* nakwa nwaanyị di ya nwụrụ,+ ka Jehova bụ́ Chineke gị wee gọzie gị n’ihe niile ị na-eme.+ 20 “Ọ bụrụ na ị ghọọ mkpụrụ osisi oliv gị, agaghachila ka ị ghọrọ ndị fọrọ n’alaka ya. Ndị fọrọnụ ga-abụ maka onye mbịarambịa, nwa na-enweghị nna, nakwa nwaanyị di ya nwụrụ.+ 21 “Ọ bụrụ na ị ghọọ mkpụrụ vaịn n’ubi vaịn gị, agaghachila ka ị ghọrọ ndị fọrọ afọ. A ga-ahapụ ha maka onye mbịarambịa, nwa na-enweghị nna, nakwa nwaanyị di ya nwụrụ. 22 Cheta na ị nọ na-agba ohu n’Ijipt. Ọ bụ ya mere m ji na-enye gị iwu ka i mee ihe a.
^ Ma ọ bụ “ajụ ya.”
^ Ma ọ bụ “ịnapụ mmadụ ndụ.”
^ Okwu Hibru a sụgharịrị “ekpenta” pụtara ọtụtụ ihe. Ọtụtụ ọrịa na-efe efe nke na-eme mmadụ n’akpụkpọ ahụ́ nwere ike iso na ya. Nje ụfọdụ na-atapara n’ákwà nakwa n’ụlọ nwekwara ike iso na ya.